Abu Dhabi ilaa Dubai sida ay ugu safreyso shaqada Luxury
Bar meel kasta Randstad Shirkadda
Published by Shirkadda Dubai City at April 19, 2018
Inta badan dadka ku nool Waddanka Isu-tagga Imaaraadka Carabta Emirates. Iskuday inaad garato sida looga safro Abu Dhabi oo aad Dubai. Dhinaca wanaagsan, safarka u dhexeeya Abu Dhabi iyo Dubai waa mid aad u fudud oo aad u jaban. Gaar ahaan loogu talagalay ajaanibta cusub ee hadda raadinaya shaqo. Sababtoo ah mararka qaarkood, waxaad u baahan doontaa u safraan wareysiga. Tusaale ahaan, waxaad ka heli doontaa wicitaan ka socda wakiil shaqaale. Markaa waxaad u baahan doontaa inaad ka safarto Abu Dhabi ilaa Dubai.
Waxaa jira dhowr fursadaha shaqaalaha cusub iyo dadka booqashada ku imanaya UAE. Waxaad ka dooran kartaa dhowr siyaabood oo aad ku safri karto. Xaqiiq ahaan, nooc kasta oo gaadiid ah oo aad dooran doonto. Waxay ku habboonaan doontaa qorshaha safarkaaga. Midkastoo jecel UAE ka Abu Dhabi ilaa Dubai. Taasi waa dhab, laakiin shirkadayadu waxay jeclaan lahayd inay waxoogaa yar ka kororsato mowduucan.
Waad ka safri kartaa Abu Dhabi Dubai waa dhowr siyaabood. Laga soo bilaabo baska aasaasiga ah ee rakhiis ah, tagaasida iyo safarka raaxada sida helikabtar ama doonyo. Sida qurbaha ama adeegsade maxalli ah. Waxaas oo dhami waxay imaanayaan iyagoo safar ula socda Abu Dhabi oo tagaya Dubai. Shirkadda Dubai City waxay leedahay rajo ah inaad ku raaxeysan doonto qodobkayaga. Waadna ogaan doontaa waxa ku saabsan safarka iyo ka shaqeynta Emirates.
Sidee uga safri kartaa Abu Dhabi ilaa Dubai?
Safarka uu ka shaqeynayo Baska
Gaadiidka ugu weyn ee aad isticmaali karto si ay uga safraan magaalada Abu Dhabi ee Dubai waa Bas. Basasku waxay badanaa tagayaan daqiiqad kasta oo 20 ah oo ka timaada Al Ghubaiba Bus Station ee Dubai.
Ugu fiican meel Baska waa Al Ghubaiba Metro Station. Xaqiiqdii, meeshani waa uun labo dabaq ka fog meelaha guud ee dadweynaha. Dhanka kale, waa suurta gal in laga yimaado meesha Garoonka Caalamiga ah isticmaalka mitrooga. Gudaha United Arab Emirates, Basaska waa qaali. Tusaale ahaan, basaska badankood waxay la yimaadaan qaboojiye iyo nal iftiin dhow. Dhanka togan, qiimuhu waa 25 Dhs oo ka soo noqda Dubai 15 Dhs. Marka waa cadaalad ku filan safarka.
Xarunta basaska iyo basaska laftooda. Ku shaqeeyaa wada shaqeyn la leh Dubai iyo maamulka gaadiidka Abu Dhabi.
Basaska magaalada Dubai iyo Abu Dhabi
Socdaalkii oo dhan ganacsi sida basaska. Ma iska leh shirkadda Abu Dhabi. Oo iyagu waxay ku dallacayaan 15 Dhs qaab kasta. Waa in la xasuusto, Baska kowaad wuxuu ka tagaa 6 iyo midkii ugu dambeeyay ee 11. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad u baahan tahay inaad si caqli leh u qorsheyso maalintaada. Hadaan ka safro magaalada Abu Dhabi oo aan aado Dubai. Basaska ayaa ka tagaya marinka ku yaal geeska Hazza bin Zayed Kowaad (11th) St iyo Bariga (4th). Iyo meeshan waxaa laga heli karaa dhammaan noocyada. Waxaad heli kartaa xoogaa fudud ama rooti. Ama xitaa aqri buugaagta qaar si loo helo MBA shaqooyinka UAE.
Baska ayaa sida caadiga ah joogsiga joojiya uma baahnid inaad la xiriirto darawalka. Hadaad ka tageysid Dubai. Basaska ayaa joogsan doona dhow Jasiiradda Jasiiradda iyada oo ka socota Dubai ilaa Abu Dhabi. Aad ayey muhiim u tahay adigu waxay u baahan yihiin inay maskaxda ku hayaan. Kuraasta hore ayaa had iyo jeer loogu talagalay dumarka iyo qoysaska, sidoo kale kuraasta dhabarka dambe ee basaska waxaa leh ragga oo keliya. Taasi waa qaanuunka gudaha UAE.
Abu Dhabi iyo Dubai oo la socday Taxi
Aynu sheegno inaad tahay qofka imanaya ee Dubai International Airport. Waqtiguna waa inta u dhaxaysa 11 pm iyo 6 am. Annaga oo sheegneyna ma heli doontid bas ama xarun metro. Xulashada kaliya ee kuu furan adiga waxay noqon doontaa taksi. Had iyo jeer waad isku dayi kartaa inaad kiraysato ama aad noqotid darawal Uber.
Xaraash waa gaariga ugu fiican waqtigaas. Si dhakhso leh ayaad uga soo guuri kartaa garoonka diyaaradaha kuna tegaysaa Abu Dhabi. Iyo kharashaadka ay kuxiran yihiin 300 Dhs qaab kastaa. Waa tan ugu fiican iyo hab aad u aamin ah oo loogu safro qoyska. Gaar ahaan haddii aad ilmo kula jirto. Ma qarashgareyn doonaan saacadaha 6 oo sugaya baska si uu u bilaabo hawlgalka. Markaa Abu Dhabi ilaa Dubai waa hab fiican oo loo qaado cabsi.
U safarka shaqada ee Etihad tababar lacag la'aan ah
Shaqaalaha cusub ee Dubai oo ku safraya Etihad oo ku sii jeeday Abu Dhabi iyo Dubai. Faa'iidada diyaaraddani waa in rakaabka la socda Etihad ee fasalka Dhaqaalaha ay dareemaan farxad weyn. Sababtoo ah waxay ka faa'iideysan karaan tababaraha xorta ah adeegga garoonka diyaaradaha Abu Dhabi. Maskaxda ku hay in shirkadani bixiso basas bilaash ah oo taga una tagaya Abu Dhabi. Kaliya haddii aad isticmaasho shirkadooda oo aad haysato tikit sax ah.
oo keliya ayaa diidmo shirkadan waa in Boos celinta ay tahay in la sameeyo 24 saac kahor. Safarkaana waa in lagu ogaadaa laguna cadeeyaa gudaha shabakada Etihad ama waad wici kartaa xafiisyadooda. Had iyo jeer hubi Waxaad ku socon doontaa jidka saxda ah. Sababtoo ah ma dooneysid inaad guri la'aan ku noolaatid dhowr saacadood. Ama xitaa dib u duula oo Raadinta shaqooyinka Mumbai.
Gawaarida ayaa ka safreysa Abu Dhabi ilaa Dubai
Noocyada gaadiidka noocyadani caadi ahaan waa la awoodi karaa dadweynaha. Xusuuso taas ee Imaaraadka Carabta gaasku waa mid aad u jaban. Sidaa daraadeed waa sababta Carabta loo isticmaali karo ciyaaraha isboortiga ee kubbadda cagta ee HMV. Maadaama aad rabto ku safraya baabuur UAE. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato inay jirto meel dhigasho la dhigto oo bilaash ah meel kasta oo ka mid ah Emirate-ka. Abu Dhabi iyo Dubai waa meel ballaaran wadarta.
Gawaarida bilaashka ah waxaa ka mid ah inta badan hotels iyo shopping xarumaha. Gaar ahaan magaalooyinka Sharjah, Dubai iyo Abu Dhabi. Waa muhiim in taas la ogaado waxaa jira lacago dheeraad ah oo dheeraad ah intaad isticmaaleysid kaarka deynta ee Dubai. Sidaas weydii, ka hor intaadan tagin saldhigga batroolka. Haddii kale, adiga bangiga kaadhka ayaa si toos ah u bixin doona.
Inkastoo ay Abu Dhabi ku wadaan Dubai
Marwalba way jiraan wadooyinka wanaagsan ee Abu Dhabi ilaa Dubai. Intooda badana waa booliiska-f ee Imaaraadka Carabta. Iskuna day inaad maskaxda ku hayso inay lagama maarmaan tahay intaad baabuur ku leedahay UAE. Ama waxaad kaliya kireysataa gaari si aad ugu dalxiiso safar ahaan. Waxaad u baahan tahay inaad haysato laysanka wadista caalamiga ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u baahan tahay inaad haysato laysanka darawalnimada caadiga ah ee uu soo saaray wadankaaga. Sidoo kale gacantaada ku jira waad ka ganacsan kartaa xoogaa 'cryptocurrency' ama waxaad ka heli kartaa shaqo halkaas.
Sharcigan waxaa fuliya annaga waayo-aragnimo iyo qurbo-joog cusub oo ku nool Dubai. Way ka fududdahay in baabuur laga kireeyo magaalada Dubai marka loo eego Abu Dhabi. Malaha maxaa yeelay waa dhul aad u ballaaran. Laakiin ma ahan wax aad u adag in labadaba la helo gaari labada ah ee Imaaraadka Carabta garoomada diyaaradaha.
Laga soo bilaabo Dubai ilaa Abu Dhabi baabuur la'aan?
Haddii aadan haysan liisan darawalnimo ah dhibaato maaha. Wixii a tilmaama in lahaanshaha dadweyne heer caalami ah nidaamka gaadiidka meesha. Inta badan dadka ku nool fikrada qaldan ee ku saabsan safarka Abu Dhabi ee ku socda Dubai. Hadaad jeceshahay inaad u safarto inta udhaxeysa Dubai iyo Abu Dhabi waqtiga habeenkii. Suuragal ma ahan haddii aadan gaari gaarin oo aad halkaas baabuur ku waddid adigu.
Dhanka kale, waa 2018 iyo 21ts qarnigii. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dhibaatada sanadkii la soo dhaafay ee gaadiidka ayaa laga yaabaa inay run tahay. Laakiin tan iyo Dowladdu waxay isku dayeysaa inay taabato kiiskan. Maamulka Wadooyinka & Gaadiidka Magaalada Dubai iyo waaxda Gaadiidka ee Magaalada Abu Dhabi. Bilow inaad si xagjirnimo ah uga shaqeyso xallinta dhibaatadan. Iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo khaas ah bilaw inaad wax ka qabato. Inta badan waxay leeyihiin ayaa si adag u shaqeeyay sannadihii la soo dhaafay si loo xaliyo dhibaatadan. Fiiri u safri waddooyinka UAE. Waxaa jira cusbooneysiin cusub oo soo socda.
Abu Dhabi Dubai oo loo aqoonsaday shaqo cusub
Waxaa jira dad badan oo ajinebi ah oo u socdaalaya shaqada. Gaar ahaan min Abu Dhabi ilaa Dubai. Dabcan, qaar baa keydiya xoogaa lacag ah. Iyaguna waa ay qayb ka noqonayaan waxayna ku bixinayaan lacag kiro ah kor u kaca DHs200 si walba !. Laakiin qaab caadi ah aad bay ugu faraxsan yihiin safarka inaad u shaqeyso qaabab caadi ah. Qaabka ugu macquulsan ee loo safro oo loogu talogalay in laga shaqeeyo magaalada Dubai oo ah dalxiis waa baska dadweynaha.
Taariikhda safarka Abu Dhabi Dubai Hal iyo badh ilaa laba saacadood. Dhammaan waxay kuxirantahay waqtiga iyo taraafikada gudaha UAE.
Immisa ayey qabtaa? kharashka ku baxa inaad UAE tagto?. Tikidhada waa Dhs25 hal dhinac. Sidoo kale lacagtaas waxaa lagu bixin karaa adigoo isticmaalaya kaarka caadiga ah ee RTA.
Waa imisa? kharash gareeyayaashu ma u baahan yihiin inay kharash gareeyaan. Ku safrida baska waa gaadiidka ugu macquulsan. Iyo ilaa iyo hadda wadada ugu jaban si aad shaqo u hesho min Dubai ilaa Abu Dhabi. Dabcan, haddii aad gebi ahaanba cusub tahay oo aadan haysan gaari kuu gaar ah. Waxaana jira laba ikhtiyaar oo ku xiran taas degaanka Dubai waxaad hadda ku nooshahay oo ka shaqeyneysaa.
Habka Luxury ee duulimaadyo helikobtar ah
Ok, safarkii ugu dambeeyay ee aad isticmaali karto waa diyaarad Helikobtar ah oo ka duusha magaalada Abu Dhabi una kacaysa Dubai. Tani waa mid ka mid ah sida ugu wanaagsan uguna raaxada badan ee UAE. Iyo sida aan wada ognahay Dubai iyo Abu Dhabi. Guud ahaan hadalka, waxaa si fiican u yaqaan dadka hodanka ah iyo meelo qaali ah sida hoteellada 7-star iyo xaddi badan oo isboorti baabuur iyo guryo raaxo leh.
Safarkan wuxuu inta badan u yahay ganacsatada maxalliga ah ee Imaaraadka Carabta. Qaar ka mid ah Qurbajoogta Hindiya ayaa isticmaalaya helikabtarro si ay u safraan. Laakiin waxay yihiin shaqo aad u fiican, tusaale ahaan, madaxa shirkadda ama CFO ee Dubai.
Waqtiga safarka? 35-55 daqiiqado iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada.
Waa imisa in lagu raaxeysto? Kiraysiga hektabiga ee gaarka loo leeyahay waa wax badan oo loogu talagalay qof walba. Guud ahaan, xeer ayaa bilaabmaya agagaarka Dhs14,900 ee dadka 2-5
Waa maxay sababta uu qof u baahan yahay? Qaar ka mid ah dadka lacagtu waa warqad oo keliya. Marka iyagu ma haystaan ​​wax ay kireystaan ​​helikabtarro. Tusaale ahaan, siyaasigu wuxuu doonayaa inuu caasimada yimaado. Gaar ahaan haddii ay soo booqanayaan Boqorka Dubai. Waa inay lahaadaan heer fasal oo ku habboon. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, jawaabtu waa in la qaado helikobtar. Waxay u badan tahay inay heshiis sameeyaan oo ay la xiriiraan.
Safarka Luxury ee Dubai iyo Abu Dhabi
Waxaa jira sharci-gaar ah oo aad u tiro badan shirkadaha iyo gawaarida isboortiga ee UAE. Tusaale ahaan, hoteellada Fly Dubai ama Dubai waxay bixiyaan xalal macaamiisha loogu talagay oo loogu talagalay. Dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
Qaar ka mid ah madaxda sare ee ganacsigu waxay u safrayaan Abu Dhabi Dubai. Iyo badankood waxay ka soo qaadan karaan helikabta meel u dhow Dubai ama Abu Dhabi. Markaad gaarto Abu Dhabi shaqada. Waxaad hubaal noqon doontaa mid ka mid ah. Sida Hawlaha shaqada ee jagooyinka sare ee maamulka, waxaad ku safri doontaa qaab qurux badan.
Waa hubaal inaad booqo xaflad Magaalada iyo xarunta Magaalada a lot. Intaa waxaa sii dheer, darawalkaaga ayaa adiga iyo reerkaagaba geyn doona Emirates Palace ee Abu Dhabi. Markaa intaas oo dhan wuxuu socdaal raaxo leh uga socdaa Abu Dhabi una socdaa Dubai. Safarka raaxada ayaa sidoo kale ku jira dhowr ikhtiyaar oo kale sida helikobtarro muuqaal la yaab leh shaqaalaha. Qolka aamusnaanta, qaboojiyaha-hawo-qaboojiyey loogu talagalay maamulayaasha VIP-da. Intooda badanina waxay la yimaadaan gudaha maqaar gacan ku duuban oo kugu xiri doona halkaad u socoto fasalka ganacsiga.
Safarka UberCHOPPER Dubai
Sidaad ogtahay Dubia waxay kusii kordheysaa ganacsiga iyo dhaqaalaha si loo gaaro heerka ugu sarreeya. Mid ka mid ah tusaale u safridda Abu Dhabi. Taasi waa in aad naftaada ka heli kartaa chopper ah kana yimid Uber. Qiimaha hoose ee suurtagalka ah ee Dhs600 qofkiiba muuqaal buu leeyahay UberChopper website.
Adeeggu wuxuu xidhnaa, gaar ahaan kuwa isticmaala Abu Dhabi cusub. Tani waa mid ka mid ah qaababka si ay uga safraan magaalada Abu Dhabi ee Dubai. Waxaad tusaale ahaan ka tagi kartaa Atlantis The Palm Helipad halkaasoo shaqooyinka suuq-geynta waa dhinac adag oo maareyn ah. Oo ku dhammaanaya mid ka mid ah xarumaha magaalada ee hoteelada ku yaal Dubai City. Waa ma aha faahfaahin been abuur ah oo runtii jirta. Waad booqan kartaa About websaydhka isla markaana ku xaqiiji iyaga. Waad heli kartaa chopper iyo u duula dalka Isutagga imaaraadka carabta.
Xawaaladda u safreysa Duba ilaa Abu Dhabi
Safarka ugu caansan ee Imaaraadka Carabta waa mid aad u yar. Laakiin tani waxa kaliya ee loogu talagalay boqolkiiba wax yar oo ka mid ah dadka ku jira Imaaraadka Carabta. Tusaale ahaan Kuwaitta Kuwait. Sameynta lacag kugu filan oo aad ku sameyso waxyaabo noocaan ah waqti ka waqti.
Waqtiga safarka ee ku yaal xaafad? Kaliya saacadda badh, ama ugu badnaan shan iyo afartan iyo shan daqiiqo. Imaaraadku waa a kaliya meel cajiib ah hadaad lacag haysatid. Dhanka kale, waxaad hodan ku noqon kartaa Imaaraadka.
Immisa ayey ku kacaysaa? Waxaas oo dhan waxay kuxirantahay cabirka yamenka. Ma jirto jid loo helo tigidhada heerka dhaqaalaha oo ay la socdaan shirkadaha Yacht Chartered. Qiimaha runti waxay kuxirantahay cabirka yamenka iyo imisa qof ayaa kula joogaya. Hadaad taqaan suuqa ma ahan qaali intaas.
Sidee bay u shaqeyneysaa safar? Haddii aad qabto duulimaad ayaa ballansaday midowga Yurub ama Aasiya tusaale ahaan Imaaraad ama Etihad. Kadib hab caqli gal ah waxaad ka degi kartaa garoomo diyaaradeed oo gaar loo leeyahay. Ka dibna waxaad heli kartaa darawal, isagu wuxuu markaa kuu geyn doonaa dekedda. Oo halkaas waxaad ka isticmaali doontaa doonni.
Waxaa lagugula talinayaa inaad horay u sii qabsatid yakts. Waad la yaabi kartaa, laakiin waxaa jira dhowr ganacsato ah oo safka kaga jira UAE. Iyo dadkaas iyo sidoo kale waxay kula joogaan garoonka diyaaradaha. Hadana waa laga yaabaa inay horeyba u ballansadaan. Marka iska hubi inaad si dhakhso leh u ballansan doonto. Gudaha Dubia ama Abu Dhabi xitaa booska ayey ku khaarijinayaan yachtsku waxay noqon karaan suuq mashquul ah.
Qaabka mustaqbalka ee Abu Dhabi Dubai
The Dawladda Dubai mustaqbalka Wuxuu ku dhawaaqay in istaraatiijiyada gaadiidka ee madaxabanaan ee Dubai lagu fulin doono Waxay raadinayaan inay dhisaan Hyperloop iyo baabuur dhigashada hoos yimaada Dubai iyo Abu Dhabi. Iyo mashaariic badan oo kale maxaa yeelay haddii ay raaci doonaan Istaraatiijiga. Mashruuca mustaqbalka ee Dubai iyo Abu Dhabi waxay ka caawineysaa dhimista qarashyada gaadiid boqolkiiba boqol. Iyo maadaama ay iyagu maareyn doonaan natiijada ka dhalatay kaydinta ilaa AED 44 milyan sanadkii. Iyo lacag noocan ah, waxay abuuri doonaan meelo cusub si ay u shaqeeyaan.
Waqtiga safarka si aad uga shaqeyso Abu Dhabi ilaa Dubai? Ilo la xiriira Dowladda ayaa leh waxay saadaalin doontaa daqiiqadaha 15!. Marka waxay raadinayaan inay maareeyaan qaab ka gaaban kan hadda. Dabcan, way ahaan doontaa wanaagsan ee martida hadda jirta iyo dadka cusub. Gaar ahaan haddii UAE goynta waqtiga xaddiga saacadaha 2 illaa daqiiqado 15. Safarka Abu Dhabi ilaa Dubai.
Immisa ayey ku kacaysaa? Sicirbararka ay dadka Dowladdu dhahaan. Waxa la yaab leh waa inay ahaataa mid ka raqiisan qiimaha tareenka xawaaraha sare ku socda. Markaa ma awoodi karno sug marka ay taasi dhici doonto. Hadaad ku faraxsantahay inaad eegto mashaariicda mustaqbalka waa inaad hubsataa inaad soo booqatid shabakada ganacsiga Carbeed ee hoos ku xusan. Dhanka kale, sidoo kale waaxda socdaalka, waxaa jira meelo badan oo nabadgelyo oo cusub oo laga furay UAE.
Gabagabeynta socdaalka Abu Dhabi ama Dubai?
Waa maxay waxa ugu fiican meel aad ku noolaato oo aad u safartid shaqada?. Jawaab malahan taas, waxay kuxirantahay waxaad qabanayso. Iyo inta lacag ee aad hadda sameyneyso. Shirkadda Dubai City ee dib u eegista ku jirta waa Dhammaantood waa kuwa kugu habboon. Waxaan isku daynay inaanu daboolno qaar ka mid ah dariiqooyinka caadiga ah iyo qaar ka mid ah qaababka qurxoon Gaar ahaan haddii aad jeclaan lahayd safar oo ka shaqeynaya debedda ama Abu Dhabi ilaa Dubai.
Waxa jira qaar ka mid ah dhinacyada wanaagsan iyo dhinacyada taban ee Imaaraadka. Laakiin safarka inta udhaxeysa Abu Dhabi iyo Dubai waa hagaag. Waxaan rajeyneyaa inaan ku arko adiga oo akhrinaya qoraaladeena. Niyad wanaag iyo jecel Dubai Shirkadda Magaalada. Sababtoo ah kooxdeena had iyo jeer waa sugaya in lagu caawiyo dadka ajnebiga ah.
Shirkadda Dubai City hadda waxay bixiyaan hage wanaagsan oo loogu talagalay Shaqooyinka magaalada Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.